IZiko elinye lezoRhwebo leHlabathi lifikelela kwiBali eli-100, kodwa lilahlekile imigangatho embalwa - Izindlu Ezithengiswayo
Eyona Izindlu Ezithengiswayo IZiko elinye lezoRhwebo leHlabathi lifikelela kwiBali eli-100, kodwa lilahlekile imigangatho embalwa
IZiko elinye lezoRhwebo leHlabathi lifikelela kwiBali eli-100, kodwa lilahlekile imigangatho embalwa
Phezulu, phezulu ...
IZiko elinye lezoRhwebo leHlabathi lifikelele kumabali ali-100! Kanjalo. Kufumaniseka ukuba i-100 luhlobo oluthile lwenamba engenantsingiselo kuba eminye imigangatho ayikho, Ijenali yeWall Street iingxelo.
Ngelixa umphezulu wenqaba yentsimbi yenqaba okwangoku ikumgangatho we-100, isithethi sikaTishman uJohn Gallagher uqinisekisile nge-imeyile, inqaba yayikumabali angama-93 kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo. Inqaba ngu Ukunyuka ngokwenene, ngokukhawuleza okukhulu -Umndilili we-9.5 yeenyawo ngeveki- kodwa hayi amabali ama-7 kwiiveki ezi-2 ngokukhawuleza.
Ke kwenzeka ntoni?
Ngokusisiseko, imigangatho engama-94 ukuya kuma-99 ayikho.
Yinto eqhelekileyo ukwenziwa kweenqaba eziphakamileyo ukuze ubone ubungakanani bemigangatho eyahlukileyo, utshilo isithethi sePort Authority. Ijenali.
Inqaba, ngoku eyi-1,240 iinyawo ngaphezulu komhlaba, iya kuthi ekugqibeleni ifike kumabali ayi-104 (1,368 iinyawo). Kungekudala iza kuba nde kunesakhiwo se-Empire State (1,250), kodwa ulawulo olunjalo lwasesibhakabhakeni lunokuhlala ixesha elifutshane kunye nenqaba yokuhlala i-432 Park Avenue ngoku ekulindeleke ukuba ifike kwi-1,397 yeenyawo.
Ukugqitywa kwenqaba kulindeleke ukuba kuphele u-2013, uGallagher usixelele.
Kukwakho nezinye izinto ezingaqhelekanga ezenziwa, njengenyaniso yokuba ayizizo zonke imigangatho enobude obulinganayo. Umgangatho wokugqibela weofisi, ophela ngama-90, kunye nakwimigangatho 91, 92 kunye ne-93, ephethe izixhobo zoomatshini, zinophahla oluphezulu kunesiqhelo. Kwaye ngenxa yokuba inqaba ine-186-yeenyawo, isiseko esingenakuhlala, indawo yokulinda ephezulu kwisiseko sesiseko ikumgangatho we-19.
Konke oku kusenza sizive sinesiyezi kwaye sididekile-luhlobo lokujonga phantsi phezulu kumgangatho we-100.
UTomi Lahren uza kudlala inkwenkwezi kwiPro-Life Film emva kokuba uBlaze emgxothile ngokuba yiPro-Choice
I-Breakout Star uTimothee Chalamet ngendlela iNdima yakhe 'yelizwe lakowabo' eliphembelele ngayo 'iNenekazi leNtaka'
IMotorhead 'ekhawulezayo' uEddie Clarke Udlulile
isenzo sikathixo jim parons
Ziindawo ezili-100 zamaKristu zokuthandana simahla
U-elon musk kunye nomark zuckerberg
jonga irekhodi lolwaphulo-mthetho mahala